Lahm: “Waa Wakhtigii Barcelona La Garaaci Lahaa”
HomeChampions LeagueLahm: “Waa Wakhtigii Barcelona La Garaaci Lahaa”
Kabtanka kooxda Bayern Munich ee Philipp Lahm oo warbaahinta la hadlay markii la shaaciyey in ay Bayern isku dhaceen Barcelona ayaa sheegay in wakhtigan ay tahay xilligii Barcelona lagu garaaci lahaa semi-finalka, isla markaana ay sidaas kaga hadhi lahayd tartanka.
Munich oo celcelis ahaan 7-4 ku garaacday Porto oo ay ku kulmeen marxaladdii 8da kooxood, ayaa waxa ay isku hagaageen Barcelona isku-aad qori tuur ah oo maanta lagu qabtay magaalada Nyon.
“Wakhtigan, waxay u eegtahay in Barcelona ay tahay kooxda la garaacayo.” Sidaas ayuu yidhi Lahm oo ay soo xigatay TZ.
“Barca waxay haysataa ciyaartooyo wanaagsan oo wax fiican qabtay illaa hadda. Waxa laga dhaliyey goolal tiro yar, waxayse dhaliyeen goolal badan. Laakiin marka la isugu yimaaddo semi-final, waxa aad dooneysaa in aad sidoo kale gaadho final.
“khibraddii aanu ka baray semi-finaladii hore ayaa noo sheegtay in aanay sahlanaan doonin. Waxa jirta taariikh na dhex martay Barcelona, mar kasta waanu kulanaa oo aanu isku soo noqonaa Champions League.” Ayuu mar kale yidhi Lahm
Dhinaca kale, Philipp Lahm oo waraysi siiyey UEFA markii isku aadku dhacay, ayaa waxa uu sheegay in ciyaarta dhex mari doonta Barca iyo Bayern ay noqon doonto mid farsamo la isku adeegsado, laakiin midda muhiimka ahi ay tahay in ciyaarta dambe ay ka dhici doonto garoonka Bayern.
“Labada kooxoodba waxay ciyaari doonaan kubbad fiican. Barcelona qaab fiican ayay leedahay hadda, fursadda soo bixitaankuna waxay noqon doontaa 50-50” ayuu yidhi.
Kooxda soo baxda Bayern iyo Barca ayaa waxay finalka la ciyaari doontaa Real Madrid ama Juventus midkooda soo baxa ciyaarta finalka oo ka dhici doonta Berlin markay taariikhdu tahay June 6.
Ajax vs PSV 3-0 Resumen Highlights and Goals
10/12/2017 Abdiwahab Ahmed
Simeone Oo Ka Hadlay Ancelotti, Mandzukic, Griezmann iyo Torres
21/05/2015 Abdiwahab Ahmed